Alakamisy 20, 2014 Alakamisy 20, 2014 Douglas Karr
Ny iray amin'ireo serivisy omenay ny mpanjifanay dia ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny backlinks mankany amin'ny tranonkalany. Koa satria i Google dia nikendry tamim-pahavitrihana ireo faritra misy rohy avy amin'ny loharanom-pahalalana, dia nahita mpanjifa maromaro niady izahay - indrindra ireo nanakarama orinasa SEO taloha izay niverina tamin'ny laoniny. Taorian'ny fandavana ny rohy mampiahiahy rehetra dia nahita fanatsarana ny laharana amin'ny tranonkala marobe izahay. Izy io dia dingana iray miasa mafy izay hanamarinana sy hamarinina ny rohy rehetra
Rehefa lasa tsara kokoa ny algorithman'ny motera fikarohana amin'ny famaritana sy ny filaharana ny atiny mifanaraka amin'izany, dia mihabe hatrany ny fahafahan'ny orinasa manao varotra atiny. Ity infographic avy amin'ny QuickSprout ity dia mizara antontan'isa tsy mampino izay tsy azo odian-tsy hita: Mahazo mitarika 97% betsaka kokoa noho ny orinasa tsy misy bilaogy ny orinasa manana bilaogy. 61% amin'ireo mpanjifa no mahatsapa ho tsara kokoa amin'ny orinasa manana bilaogy. Ny antsasaky ny mpanjifa dia nilaza fa nisy fiatraikany tsara ny marketing amin'ny atiny